अब बेरोजगारले पनि भत्ता पाउने ! - Everest Dainik - News from Nepal
अब बेरोजगारले पनि भत्ता पाउने !
२०७५, १७ भाद्र आईतवार
काठमाडौं, भदौ १७ । परिवारका सबैजना सदस्य बेरोजगार भएमा सरकारले सकेसम्म काम नसके निर्वाह भत्ता दिने भएको छ । संसदबाट मौलिक हकका रुपमा रहेको रोजगारसम्बन्धी बिधेयक पारित भएमा जागिर नभएकालाई सरकारले क्षमताअनुसार काम र नसकेमा बेरोजगार भत्ता दिनु पर्नेछ । नाागरिक दैनिकमा खबर छ ।
याे पनि पढ्नुस ट्राफिक प्रहरीले अब ३५ प्रतिशतसम्म भत्ता पाउने
संविधानको मौलिक हकमा राखिएको रोजगारीको हकसम्बन्धी बनेको विधेयकले परिवारमा कुनै पनि सदस्य जागिरमा संलग्न भएमा निर्वाहभत्ता दिने व्यवस्था गरिएको हो । तर, कसैले पनि झुठो विवरण पेश गरेर बेरोजगार भत्ता लिन भने पाइने छैन ।
ट्याग्स: Vatta, भत्ता पाउने